३ लाख नेपालीको मिर्गौला फेल, ३० लाखमा समस्या, बर्सेनि ३ हजार थपिँदै – Health Post Nepal
२०७५ फागुन ३० गते ९:०१
विश्व स्वास्थ्य संगठनले १० मार्चलाई विश्व मिर्गौला दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेसँगै प्रत्येक वर्ष आजकै तिथिमा विश्व मिर्गौला दिवस मनाइँदै आएको छ । यस वर्षका लागि मिर्गौला दिवसको नारा ‘सबैका लागि मिर्गौला, जहाँ गए पनि मिर्गौला’ तय गरिएको छ । बिहीबार नेपालमा पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मिर्गौला दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा मिर्गौलाबारेको न्यून चेतना तथा आर्थिक विपन्नताका कारणले मिर्गौलारोगीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।
३ लाख नेपालीको मिर्गौला फेल, करिब ३० लाखमा समस्या
केही वर्षयता संसारभर नै मिर्गौलारोगीको संख्या बढ्दै गएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । नेपालमा यो संख्या झन् बढ्दो छ । नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत अर्थात् झन्डै ३० लाख मानिसमा कुनै न कुनै रूपले मिर्गौलाको समस्या रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये करिब ३ लाख नेपाली मिर्गौला फेल भएर घरमै बस्न बाध्य छन् ।
प्रतिवर्ष ३ हजार नयाँ बिरामी थपिँदै
नेपालमा प्रत्येक वर्ष मिर्गौलारोगको उपचारमा ३ हजार नयाँ बिरामी थपिने गरेको तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन् । यो संख्या उपचारका लागि अस्पताल आउनेको मात्र हो । कतिपय बिरामी स्वास्थ्योपचारमा पहुँच अभाव र रोगसम्बन्धी चेतना अभावमा रोग पालेर बस्न र अस्पताल नै नदेखी मृत्युवरण गर्नसमेत बाध्य छन् ।
मिर्गौलादाताको अभाव, कानुनी अड्चन, महँगो सेवा, प्रत्यारोपणपछिको महँगो औषधिखर्चलगायत कारणले गर्दा नै विश्वमै प्रत्यारोपणको गति सुस्त रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् । विशेषज्ञका अनुसार परिवार वा नजिकको नातेदारले मिर्गौला दिन पाउने कानुन संसारभर बिरलै बनेका छन्, जुन नेपालले बनाएको छ ।
विश्वमा १५ लाख, नेपालमा साढे ४ हजार डायलाइसिसमा, न्यून प्रत्यारोपण
विश्वभर १५ लाख मानिस डायलाइसिसमा छन् । तर, तीमध्ये प्रत्यारोपण भने ज्यादै कम बिरामीले मात्र गरेको पाइएको छ । नेपालमा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ४ हजार ५ सयको हाराहरीमा मिर्गौलारोगीले नियमित डायलाइसिस गराइरहेका छन् । नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै प्रत्यारोपणको संख्या न्यून छ ।
नेपालले पछिल्लो समय अंग प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी कानुनी व्यवस्थासँगै निःशुल्क सेवा दिँदै आए पनि प्रत्यारोपणले तीव्रता भने लिन सकेको छैन । मिर्गौलादाताको अभाव, कानुनी अड्चन, महँगो सेवा, प्रत्यारोपणपछिको महँगो औषधिखर्चलगायत कारणले गर्दा नै विश्वमै प्रत्यारोपणको गति सुस्त रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् । विशेषज्ञका अनुसार परिवार वा नजिकको नातेदारले मिर्गौला दिन पाउने कानुन संसारभर बिरलै बनेका छन्, जुन नेपालले बनाएको छ ।
डायलाइसिस र प्रत्यारोपण निःशुल्क, तर प्रत्यारोपणपछि नियमित खानुपर्ने औषधि महँगो
मिर्गौला फेल भएपछि उपचारको दुईवटा मात्र विकल्प रहन्छन्– डायलाइसिस र प्रत्यारोपण । नेपाल सरकारले पछिल्लो समय यी दुवै सेवा निःशुल्क गरेको छ ।
नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि नातेदारले निःशुल्क मिर्गौला दान गर्दा सामान्यताया ५ लाख रूपैयाँसम्म खर्च हुन्छ, जुन नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने गरेको छ । प्रत्यारोपणका लागि मिर्गौलादाता बिरामीको नजिकको नातेदार नै हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यस प्रावधानका कारण पनि प्रत्यारोपण सहज हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ, साताको दुई–तीनपटकसम्म नियमित गराउनुपर्ने डायलाइसिसमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ ।
प्रत्यारोपणपछि बिरामीले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सामान्य नेपालीको पहुँचमा छैन । यही समस्याका कारण पनि निःशुल्क प्रत्यारोपण सुविधा हुँदाहुँदै पनि डायलाइसिसबाटै जीवन लम्ब्याइरहने अवस्था आएको मिर्गौलारोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्ले बताउँछन् । सरकारले प्रत्यारोपणपछि मासिक करिब १० हजारका दरले अवश्यक पर्ने औषधिसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सुरुमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि मात्र निःशुल्क मिर्गौला उपचारको सुविधा दिँदै आएकोमा सरकारले अहिले विपन्न नागरिकका लागि समेत सेवा निःशुल्क दिइरहेको छ ।
डा. काफ्ले मिर्गौला जोगाउने अभियानमा छन् । राज्यले बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँ मिर्गौलारोगीका लागि खर्च गर्दै आएकोमा अब त्यसको करिब १० प्रतिशत मिर्गौला जोगाउनमा खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि देशका प्रत्येक गाउँ, टोल र घर–घरमा मिर्गौलासम्बन्धी चेतना पुर्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘हजार जनाको मात्र मिर्गौला जोगाउन सकियो भने पनि अर्बौं रूपैयाँ जोगाउन सकिन्छ,’ डा. काफ्ले भन्छन्, ‘त्यसैले मानिसले समय–समयमा स्वास्थ्यजाँच गराउनु आवश्यक छ ।’ लक्षण देखापर्न थालिसकेपछि मिर्गौलाको उपचार गर्न कठिन हुने उनी बताउँछन् ।
नेपालमा सरकारीस्तरमा वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गराइरहेका छन् । प्रत्यारोपणले गति लिए पनि आवश्यकताअनुरूप तीव्रता लिन नसकेको डा. काफ्लेको ठम्याइ छ । प्रत्यारोपणपछि खानुपर्ने औषधि किन्ने क्षमता नहुनेले प्रत्यारोपण गर्नुको कुनै अर्थ नहुने भएकाले यसलाई गति दिन सरकारले उपचारपछिको औषधिसमेत निःशुल्क गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । यसका साथै चेतनाविस्तार गरी अंगदानको डोनरकार्ड सिस्टमलाई बढावा दिँदै मस्तिष्कमृत्यु भएका बिरामीको अंगदान गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विश्वमा धेरै अगाडिदेखि सुरु भएपनि नेपालमा सन् २००८ देखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु भएको हो । एक दशकअघि त्रिवि अस्पतालबाट सुरु भएको मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा हाल सरकारी र निजी गरी आधा दर्जन अस्पतालमा विस्तार भएको छ । हालसम्म जम्मा ७ वटा अस्पतालले प्रत्यारोपण अनुमति पाएका छन् भने ६ वटाले सेवा दिइरहेका छन् ।
११ वर्षको अवधिमा करिब १३ सय प्रत्यारोपण
विश्वमा धेरै अगाडिदेखि सुरु भएपनि नेपालमा सन् २००८ देखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु भएको हो । एक दशकअघि त्रिवि अस्पतालबाट सुरु भएको मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा हाल सरकारी र निजी गरी आधा दर्जन अस्पतालमा विस्तार भएको छ । हालसम्म जम्मा ७ वटा अस्पतालले प्रत्यारोपण अनुमति पाएका छन् भने ६ वटाले सेवा दिइरहेका छन् । सेवा सञ्चालनको ११ वर्षको अवधिमा करिब १ हजार ३ सयको हाराहरीमा प्रत्यारोपण गरिएको अस्पतालहरूको तथ्यांकले देखाएका छन् ।
मिर्गौलामा खराबी आउन नदिनु नै उत्तम उपाय
डा. काफ्लेका अनुसार मिर्गौलारोगबाट बच्ने पहिलो उपाय भनेको यसबारे चेतना विस्तार गरी मिर्गौलामा खराबी हुन नदिनु नै प्रथम उपाय हो । यसका लागि स्वस्थ व्यवहारका अतिरिक्त वर्षको एकपटक अनिवार्य मिर्गौलाको अवस्थाबारे स्वास्थ्यजाँच गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । नियमित रूपमा पिसाबमा एल्बुमिन, प्रोटिन गएको छ कि छैन तथा सिमोकियाटिक लेबल जाँच गराएर मिर्गौलालाई बिग्रनबाट जोगाउन सकिने उनी बताउँछन् ।
विलासीपूर्ण जीवन जिउने र सुविधाभोगी जीवनशैलीका कारण मोटोपनसँगै मिर्गौलामा समस्या बढ्दै जाने भएकाले सन्तुलित खाना, सरल जीवनशैली र पर्याप्त मात्रामा व्यायाम गर्नुपर्ने डा. काफ्ले बताउँछन् । बिहान वा बेलुका दैनिक कम्तीमा ३० देखि ४५ मिनेट हिँडडुल गर्न डा. काफ्लेको सुझाब छ । यसका साथै, मिर्गौला स्वस्थ राख्न दैनिक २ लिटर पानी पिउने, व्यायामलाई दैनिकीको अभिन्न पाटो बनाउने, अस्वस्थकर खानेकुरा नखाने, चुरोट, सुर्ती तथा मासु धेरै नखानेजस्ता कुरामा सावधानी अपनाउन उनी सुझाउँछन् । त्यसैगरी, प्रेसर, डाइबिटिज सधैँ सन्तुलनमा राख्न डा. काफ्लेको सुझाब छ । स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने पेन किलरको तथा कडाखालाका एन्टिबायोटिक सकेसम्म घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विश्व मिर्गौला दिवस